Qoraalka iyo qoraalka Cuncunaha majalladaha marnaba ma dhawaaqin
Cun gambaleelka marnaba ha maqlin - qoraalada iyo qoraalka
Cun geeluhu marna ha maqlin - qoraalka
Dhaqanka ah heesaha carafka Christmas ee guriga kula qoyska iyo carruurta, ama dugsiga iyo xanaanada, ma aha mid aad u weyn. Kaliya marka laga hadlayo 18. Century heeso qoyska circle iyo kaliya tan iyo 19. Century wuxuu ogyahay mid ka mid ah Jarmalka heesaha dalal kale.
Qoraalka iyo qoraalka Cuncunka guluubtu marna ma dhawaaqin
Heesidda iyo sameynta muusigga iyo isugeynta hoyga wuxuu abuuraa jawi qurxoon, oo gaar ah oo gaar ah. Ma aha oo kaliya carruurta da 'kasta oo ay jecel yihiin. Inta badan heesaha waxaa la soo celiyaa ama la maqlaa inta lagu jiro wakhtigan, si ka fiican qoraalka ayuu ku fadhiyaa. Haddii aad ciyaari kartid qalab, waxaad ku ciyaari kartaa wehel.
Adiga oo riixaya sawirka, warqadda midabaynta leh qoraalada iyo qoraalka ah ee carol Christmas waxay u furan tahay qaabka pdf
Garaac guluubyada marnaba ha maqlin
marka loo eego xilliga kirismaska,
Waxay u eg tahay in malaa'igtu ay heesayaan
mar labaad nabadda iyo farxadda.
Sida ay u heesayeen habeenkii cibaadada,
Boogaha leh dhawaaqa cufan,
Dhulka dhulka ku toosan!
Oh, marka guluubku ku soo baxaan,
dhaqso ayay u maqashay Masiixa Ilmaha:
Miyuu ka dillaacaa cirka kadib
ku dhaqso dhulka.
U duceyso Aabbaha, Hooyo, Ilmaha,
Wajiga leh cod macaan
weli way ka fog yihiin badaha,
Qof kastaa wuu jecel yahay
waqti farxad leh wakhtiga Christmas.
Qof kastaa wuxuu ku faraxsan yahay hees cajiib ah!
Xusuusiyaal ka socda heesta kirismaska ​​Sweet munaasabadu marnaba uma muuqan sida feylka feylka oo furan
Waligaa ha raacin dadka ajnabiga ah - waa inaad barataa inaad tiraahdo maya
Fox, waxaad xadday qadarka - qoraalada iyo qoraalka
Sheekooyinka qosolka ah sheekooyinka walaalaha Grimm - Bremen ...
Qoraalka Fairytale Hans Christian Andersen - The ...
Nin yar wuxuu ku taagan yahay qoryaha - qoraallada iyo qoraalka
Merry Christmas meel kasta - qoraalo iyo qoraal
Habeen wanaagsan, habeen wanaagsan - qoraalo iyo qoraal